रोचक घिमिरेकाे बाल्यकाल – Ketaketi Online
आदरणीय लेखक रोचक घिमिरे वरिष्ठ साहित्यकार हुनुहुन्छ । उहाँ नेपालको प्रसिध्द साहित्यिक पत्रिका ‘रचना’ का प्रधान सम्पादक पनि हुनुहुन्छ । निवन्ध लेखनमा सुपरिचित लेखक रोचकको बाल्यकालको रमाइलो संस्मरण यस अंकमा हामीले प्रस्तुत गरेका छौं ।
हामी त्यसै क्रमले गैरीधाराबाट टङ्गाल गणेशथानतर्फ आइरहेका थियौं । उताबाट कर्णेल डम्बर शमशेर थापा (१५ साले चुनावमा डा.के.आइ.सिंहको पार्टीबाट विजयी सांसद लोचन समशेर थापाका पिता) घोडा चढेर आइरहेका थिए । घोडाको पछिपछि सइस हिडिरहेको थियो । त्यो वेला घरानियाहरू घोडा, साइकल चढ्थे । कार मोटरसाइकल त ज्यादै कम थिए र ती राणा परिवारकै एकलौटी थिए भनेपनि हुन्छ । एक सुरले म बन्दुक पड्काउँदै, रमाइलो गर्दै हिडिरहेको थिएँ । अचानक डम्वर समशेर बूढा घोडाबाट तल सडकमा डङ्ग्रङ्ङ पछारिए । ती मोटा, सुकुमार बूढा उठ्न सकेन्, सइस भाग्न लागेको घोडा समाउनतिर लाग्यो । जम्मा भएका बटुवाहरूले कर्णेल बूढालाई उठाएर उभ्याए ।
हामी तीन भाइ फुच्चे मग्न भएर यो सबै रमीता हेरिरहेका थियौं । कर्णेल बूढाले चारैतिर हेरे । खेलौना बन्दुक मेरो हातैमा थियो । डम्बर शमशेर मेरो नजिकै आए अनि मेरो हातको बन्दुक खोसेर भने-‘यै हो तेरो बन्दूक ! बड, बन्दूक पड्काउने भा’को !’ यति भनेर उनले त्यो बन्दूक नीलकाँडाको झ्याङ्तिर हुर्र्याइदिए । मैले पड्काएको बन्दुकबाट तर्सिएर घोडाले कर्णेल बूढालाई लडाएको रहेछ । त्यसैले मेरो त्यो दोषी बन्दुकसँग उनले त्यसरी बदला लिएका रहेछन् भन्ने कुरा बल्ल बुझ्यौं हामीले । मैले अँध्यारो मुख लगाएँ ।
‘दाजुले होइन ! दाजुले होइन !’ भनेर भाइ केशव रुन लाग्यो । बूढाको आँखा सिटीमा पनि पर्ला र फ्याँकिदेलान भनेर अर्को भाइ रघु सिटी लुकाउन लाग्यो । त्यहाँ उभिएका पाका मान्छेहरू पनि ‘कर्साबलाई लडाउने, बदमास केटाहरू !’ भन्दै हामीलाई नै गाली गर्न लागे । कसैले त हामीलाई चिनेका पनि रहेछन् र यी गहनापोखरीका पण्डित बाजेका छोरा हुन् भनेको पनि सुनियो ।
बाले थाहा पाउनुहोला भनेर हामीलाई डर लाग्यो ।हामी तीनभाइ लुत्रे कान लगाएर घरको बाटो लाग्यौं । डम्बर शमशेर बूढा खोच्याङ् खोच्याङ् गर्दै पैदलै हिडे । सइस घोडा डोर्याएर लुखुर लुखुर उनको पछिपछि लाग्यो ।
लप्टनबा तारानाथले चाहीं यो कुरा थाहा पाउनुभएछ । एकदिन उहाँले मलाई भन्नुभो- ‘तिमीहरूले बन्दुक पड्काएर घोडाबाट पछारिएका कर्णेल बूढा केही दिन थला परेर बल्ल उठेछन् बिचरा !’
November 11, 2021 February 28, 2022 Ketaketi Online